Ukucatshangelwa ku-Building Vs Buying MarTech | Martech Zone
I-Build Versus Buy Dilemma: Ukucatshangelwa Okuyi-7 Kokunquma Okuhle Kakhulu Kwebhizinisi Lakho
ULwesithathu, April 7, 2021 ULwesithathu, April 7, 2021 Unnathi Rayaprolu
Umbuzo wokuthi kwakhiwe noma kuthengwa isoftware kuyimpikiswano ende eqhubekayo phakathi kongoti abanemibono ehlukahlukene kwi-inthanethi. Inketho yokwakha isoftware yakho yangaphakathi noma ukuthenga isisombululo esenziwe ngomumo emakethe igcina iningi labenzi bezinqumo lididekile. Njengoba imakethe ye-SaaS ichuma enkazimulweni yayo egcwele lapho usayizi wemakethe ukhonjiswa ukuthi uzofinyelela ku-USD 307.3 billion ngo-2026, kwenza kube lula ukuthi imikhiqizo ibhalisele izinsizakalo ngaphandle kwesidingo sokugcina i-Hardware noma ezinye izinsiza.
Ngaphambi kokuthi singene ngqo empikiswaneni yokwakha nokuthenga, ake sihlole ukuthi ukuziphatha kwamakhasimende nezindlela zokuthenga kudlule kanjani kuguquko futhi.
Inguquko yedijithali inamakhasimende ahlomile anama-Smartphones, amathebulethi kanye nabasebenzisi namuhla bafuna insizakalo elindelekile, ngaleyo ndlela bakhe iminikelo yomkhiqizo abayisebenzisayo. Sezadlula izinsuku zemikhiqizo ezilawula futhi ezinomthelela kulindelo lwamakhasimende. Ngenkathi ukukhathala okukhethwa kukho kanye nobushiqela bokukhetha kuthonye inqubo yokwenza izinqumo, izinjini zokuqhathanisa amanani, ezihambisana namazwi wabaholi bamaKin Key Opinion (KOLs) nabashukumisayo, zisiza abasebenzisi ukuthi bathenge ngolwazi.
Indlela Yokuthenga Yesimanjemanje
Ukushintshwa kwamandla okushintsha kwamandla phakathi kwamakhasimende nemikhiqizo kubuyise indlela yokuthenga yendabuko. Indlela yesimanje yokuthenga, eqhutshwa yintuthuko yezobuchwepheshe kanye nemithombo yolwazi eminingi, ikhiphe imikhiqizo emashalofini ezitolo yayifaka ngaphakathi kwendalo yedijithali, yeqa imigoqo yendawo ukwenza ukuthengiselana kungabi namthungo futhi kube enembile.
Source: Umhlahlandlela Womthengi we-MoEngage Ekubandakanyeni Amakhasimende
Lesi sithombe esingenhla sikhombisa ukuthi umjikelezo wohambo lwabathengi udlule kanjani ekushintsheni okukhulu kwepharadigm, okushintshe ubudlelwano bomkhiqizo wamakhasimende kusuka kokuphakelwa okuqhutshwa kwaba okudingwa yimfuno.
Uma ubheka lawa maphuzu angenhla wokuthi imikhiqizo ihlose kanjani ukuba ngamakhasimende amaningi ekusebenzeni kwayo, kubaluleke ngokwengeziwe ukubhekana nenkinga yokwakha nokuthenga. Kepha akuyona leyo eqondile. Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi kungcono yini ukwakha ipulatifomu kusukela ekuqaleni noma ukuthola ubuchwepheshe obukhona, nazi izinto ezimbalwa okufanele uzicabangele:
Izindleko ezithintekayo ekwakheni noma ekuthengeni: Ukwakha okuthile kusuka ekuqaleni kuzoba kukhulu ngokuya ngosayizi weqembu / wenkampani futhi uzodinga ukubala ngezindleko zamahora omuntu, ingqalasizinda, nezondlo, konke okunzima ukukulinganisa ngokunembile. Okwamanje uthenga isisombululo sokwanelisa izidingo ezahlukahlukene ngaphakathi kweqembu, umuntu angahle adinge ukuthi abhekelele imali ekhokhwayo yelayisense eyehluka ngokuya ngokubala okusebenzayo komsebenzisi nezinsizakalo ezisetshenzisiwe.
Izingozi ezihambisana nokuthenga noma ukwakha: Izingozi ezinkulu ezibandakanyeka ekuthengeni ukulawula okulinganiselwe nokufinyelela kwi-software, ikhodi yomthombo, ne-bug, okwamanje ngokwakha isixazululo ingozi enkulu ilele emandleni okulethwa yithimba lezentuthuko elingadala izindleko ezengeziwe.
Inkinga ixazululwa ngesixazululo: Akukona ukuhlakanipha ukudlula enkingeni yokwakha okuthile okukhethekile kusuka ekuqaleni uma kungangezi ngqo entweni yakho engezansi. Imvamisa kuyalulekwa ukuthi kuthengwe izinto zonke izinkampani ezidinga futhi wakhe okukuhlukanisayo.
Landelela irekhodi lethimba lentuthuko: Linganisa amakhono nokuvuthwa kweqembu lakho lokuthuthuka ngokwamakhono, ubuchule, kanye nokukwazi ukuletha. Uma belinganiselwa ezingeni elihle, khona-ke ukwakha isoftware endlini kunengqondo kakhulu uma kuqhathaniswa nokuthenga isisombululo esilungele imakethe.
Izinsiza ezikhona onazo: Ibhajethi iyinto enkulu ethatha isinqumo uma kukhulunywa ngokuthenga ngempikiswano yokwakha vs. Ukuphakama komkhawulo wokusebenzisa osetshenziswe yimikhiqizo, kunika ukwakha isoftware umusa omkhulu. Izinkampani ezinesabelomali esilinganiselwe, ukuthenga isisombululo kuyindlela elula yokubhekana nalokhu.
Isikhathi sokuya emakethe: Enye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele icatshangelwe ukuthenga isisombululo isu elishesha kakhulu lokuya emakethe njengoba lingalethwa kungakapheli amasonto ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nesithupha (kuya ngobunzima bamacala okusetshenziswa) uma kuqhathaniswa nezinyanga noma iminyaka thatha ukwakha ipulatifomu endlini.
Izinto eziseqhulwini zebhizinisi lakho: Uma uzakhela isixazululo sakho ngaphakathi, ngabe kuzoba yinto ephambili nebhizinisi lakho? Mhlawumbe akunjalo, okungaholela ekutheni kube yisithibeli sokuthuthuka uma inkampani yakho ingakwazi ukuqhubeka nokutshala imali kuyo. Ubuchwepheshe bungumjikelezo oguqukayo njalo, akuyona iphrojekthi eyodwa neyenziwayo. Inkampani eyenza isixazululo ongasithenga incike kuleso sixazululo esivele futhi siqhubeke nokuhlinzeka inani kumakhasimende ayo.
Umuntu kufanele agweme ukuchitha isikhathi ekwakheni nasekwakheni into esivele yakhiwe kahle emakethe. Umgomo wokugcina wemikhiqizo ukuhlinzeka ikhasimende ngolwazi olusezingeni eliphakeme futhi uma lokho kuhanjiswa ubuchwepheshe obukhona, ngabe kufanele ngabe umuntu uchitha isikhathi esiningi namandla akhe isixazululo?
Ukugxila okubaluleke kakhulu ezinkampanini kungaba ukucindezela ulwazi olwenziwe ngabantu abalunikeza kuyo yonke indawo yokuthinta kubasebenzisi futhi bathuthukise ukwesekwa nezinsizakalo zabo zamakhasimende. Igebe elihlala likhula phakathi kokulindelwe ngamakhasimende kanye nekhono lomkhiqizo lokukufeza ngenye yezinkinga ezinkulu abaphathi banamuhla abahlose ukuzixazulula. Ukuze uqonde ukuthi okulindelwe ngamakhasimende kushintshe kanjani, kubalulekile ukuthi uqaphele izinguquko emsebenzini womsebenzisi nezimo zengqondo nokuthi zithinta kanjani izinqumo zokuthenga.
Tags: ubuhlobo bomkhiqizoyakha uqhathanise nokuthengaukwakha vs ukuthengaUkuhamba kwamakhasimendeumjikelezo wempilo wamakhasimendeukuthuthukiswaubuchwepheshe obuvelayoEndliniubuchwepheshe bokumakethamartechubuchwepheshe obudalaubuchwepheshe obuphelelwe yisikhathiindlela yokuthengaUbuchwepheshe
U-Unnathi ungumkhangisi onothando lokufunda noma yini entsha futhi uzitika ngamasiko ahlukahlukene ngenkathi esohambweni. Ujabulela ukufundwa kahle nenkomishi yekhofi nganoma yisiphi isikhathi sosuku.